I-china Hot melt ifilimu elinamathelayo labakhiqizi be-insole nabaphakeli | I-H & H.
Ngephepha noma ngaphandle ngaphandle
Ububanzi / m / 1.2m-1.52m njengoba egcizelele
Indawo yokuncibilika 40-60 ℃
Isikebhe sokusebenza umshini wokucindezela ukushisa: 100-140 ℃ 5-12s 0.4mpa
Ifilimu lokunamathela elishisayo le-TPU elifanele ukuhlanganiswa kwe-PVC, isikhumba sokufakelwa, indwangu, i-fiber nezinye izinto ezidinga ukushisa okuphansi. Imvamisa isetshenziselwa ukukhiqiza i-PU foam insole enobungani bemvelo futhi engeyona enobuthi.
Uma kuqhathaniswa ne-liquid bonding bonding, lo mkhiqizo uziphatha kahle ezicini eziningi ezifana nobudlelwano be-evironment, inqubo yokufaka isicelo kanye nokonga izindleko eziyisisekelo. Ukucutshungulwa kokucindezela ukushisa kuphela, lapho kungenziwa khona i-lamination.
Singawenza lo mkhiqizo nge-substrate noma ngaphandle kwawo, ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Imvamisa, kusetshenziselwa imishini yokunamathisela i-roller enkulu ukunamathisela ukusekelwa kwendwangu. Amakhasimende amaningi awasebenzisi i-substrate, noma amanye amakhasimende adinga ifilimu ene-pe film substrate lapho esebenzisa umshini wokuhlanza umbhede oyisicaba. Singakunikeza nalokhu. Ifilimu eyenziwe nge-TPU ithambile futhi iyagezeka, okuchaza ukuthi kungani lo mkhiqizo uthandwa kangaka. Ngaphezu kwalokho, iningi lale modeli liyi-500m roll, ububanzi obujwayelekile bungu-152cm noma i-144cm, obunye ububanzi bungabuye benziwe ngendlela oyifisayo.
1.Umuzwa wesandla othambile: uma ufakwa ku-insole, umkhiqizo uzoba nokugqoka okuthambile nokunethezeka.
2. Ukumelana nokuwasha amanzi: Kungamelana okungenani nokuhlanzwa kwamanzi izikhathi eziyi-10.
3. Okungeyona into enobuthi kanye nokuvikela imvelo: Ngeke ikhiphe iphunga elibi futhi ngeke ibe namathonya amabi empilweni yabasebenzi.
4. Kulula ukucubungula emishinini nasekulondolozeni izindleko zabasebenzi: Ukucutshungulwa komshini we-lamination okuzenzakalelayo, kusindisa izindleko zabasebenzi.
5. Iphuzu lokuncibilika okuphansi: lifanele amacala wokuvikela ngocwazi afana nendwangu enokumelana nokushisa okuphansi.
Ifilimu lokunamathisela elishisayo lisetshenziswa kakhulu ku-insole lamination edume kakhulu ngamakhasimende ngenxa yomuzwa wayo wokugqoka othambile futhi okhululekile. Ngaphandle kwalokho, Ukushintsha induku yokunamathela kwendabuko, ifilimu yokunamathisela eshisayo sekuyinto yezandla enkulu ukuthi izinkulungwane zezicathulo zabakhiqizi bezinto ezisetshenziselwe iminyaka eminingi.
Olunye uhlelo lokusebenza
Ifilimu le-L341B elishisayo elincibilikayo lingasetshenziswa nasethilini lemoto, izikhwama nemithwalo, indwangu yokuvikela ngocingo.Ukuze nje kube mayelana nokuhlanganiswa kwemikhiqizo ye-PU foam, sinezisombululo ezihlobene. Ikakhulu ekuhlanganisweni kwemikhiqizo yebhodi ene-foam, izixazululo zenkampani yethu yokusebenza kule ndawo sezikhulile impela. Kuze kube manje, sesifinyelele ukubambisana ngamasu nezinkampani zemithwalo ezingaphezu kuka-20 ekhaya nakwamanye amazwe, futhi ukusetshenziswa kwefilimu elincibilikayo elishisayo emkhakheni wemithwalo kanye nokuhlanganiswa kwezikhwama kuthole izimpendulo ezinhle kakhulu.
Langaphambilini CPE ifilimu ye-CPE iphinifa -HH
Olandelayo: Ishidi le-TPU elincibilikisayo elishisayo le-insole
Ifilimu Elestric Tpu Hot Melt
Ifilimu le-Eva Hot Melt
Ifilimu Lewebhu le-Eva Hot Melt
Ifilimu Le-Pa Hot Melt
Ishidi Le-Pa Hot Melt Glue
Ifilimu Le-Pa Hot Melt Web
Ifilimu le-Tpu Hot Melt
Ishidi le-Tpu Hot Melt Glue
PEVA seam uphawu uphawu tape for protectiv alahlwayo ...